ပိသေးလေး၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
၁။ ဆန္ဒံအဒတွာ ဂမန သိက္ခာပုဒ် (ဆန္ဒမပေးပဲ ဖယ်ခွာသွားမှု) ၂။ ကမ္မပတိဗာဟန သိက္ခာပုဒ် (ဆန္ဒပေးပြီးမှ ကံကို တားမြစ်မှု)…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by ပိသေးလေး Feb 23, 2014. 10 Replies0Likes
စဉ်းစားမိတာပါ လူတစ်ယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုတွေ့ရင်ကဲ့ရဲ့သင့်သလားမကဲ့ရဲ့သင့်ဘူးလားလို့ တစ်ခါတုန်းက တရားခွေထဲမှာနာယူခဲ့ဖူးတယ်...အမ္မပါလီ အရင်ဘ၀က ရဟန်းမဖြစ်တော့ တစ်နေ့တပည့်တွေနဲ့ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်သွားတယ်တဲ့…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ယခုအခါတွင် ရှင်သာမဏေများခံယူသော သရဏဂုံကို နည်းယူ၍ “ဗုဒ္ဓ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ” စသည်ဖြင့် သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုခံယူကြသော်လည်း ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က သရဏဂုံခံယူပုံ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် ခံယူပုံ လေးမျိုးရှိသည်။ ထိုလေးမျိုးကား -
(၁) “ယနေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ ခန္ဓကိုယ်ကို ဘုရား တရား သံဃာအား အပ်နှင်းပါ၏” ဟု နူတ်မြွက်၍လည်း ဆောက်တည်နိုင်၏။ “အတ္တသန္နိယျာတနသရဏဂုံ” ဟု ခေါ်သည်။
(၂) “ယနေ့မှ စ၍ ကျွန်ုပ်အား ဘုရား တရား သံဃာကိုသာလျှင် ကိုးကွယ်အားထားရာရှိသူဟု မှတ်ယူတော်မူပါ” ဟု နူတ်မြွက်၍လည်း ဆောက်တည်နိုင်၏။ “တပ္ပရာယဏသရဏဂုံ” ဟု ခေါ်သည်။
“ငါ့ကိုးကွယ်ရာဟာ ဒါမှ ဒါဘဲ” ဟု ရတနာသုံးပါးကိုသာ အမြဲဦးတိုက်၍ သတိရ၍ နေသော အာဠ၀ကဘီလူး၊ ဟေမ၀တ၊ သာတာဂိရနတ်စစ်သူကြီးများ ခံယူထားသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
(၃) “ယနေ့မှ စ၍ ဘုရား တရး သံဃာ၏ အတွင်းနေတပည့်ု မှတ်ယူတော်မူပါ” ဟု နူတ်မြွက်၍ တပည့်ခံသောအားဖြင့်လည်း ဆောက်တည်နိုင်၏။ “သိဿဘာဝူပဂမန သရဏဂုံ” ဟုခေါ်သည်။
အရှင်မဟာကဿပလောင်းလျာ ပိပ္ပလိလုလင် တပည့် ခံယူသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
(၄) “ယနေ့မှ စ၍ ဘုရား တရား သံဃာကိုသာ ရှိခိုးခြင်း၊ ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း၊ လက်အုပ်ချီမိုးခြင်း၊ အရိုအသေပေးခြင်းပြုသူဟု မှတ်ယူတော်မူပါ” ဟု နူတ်မြွတ်၍လည်း ဆောက်တည်နိုင်၏။ “ပဏိပါတသရဏဂုံ” ဟု ခေါ်သည်။
ဗြဟ္မာယု ပုဏ္ဏားကြီးကဲ့သို့ လွန်လွန်ကဲကဲ လေးလေးမြတ်မြတ် တုပ်ဝပ်ကြည်ညိုသဖြင့် ဆည်းကပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
12:18am အချိန်မေ 6, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:07pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 19, 2014, တွင် နှင်းဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:10pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 17, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လေးစားရပါသော.......ဓမ္မအဆွေတော် မသန္ဒာလင်း ခင်ဗျာ..။
မိတ်ဆွေ တင်ထားသည့် (ပမာဏပြုစရာ ကိလေသာမရှိသောကြောင့်) ဆိုသည့်ဘလော့သည် ရေးဖွဲ့ရာ၌ ရည်ရွယ်ရင်း ဦးတည်ချက်မှ သွေဖယ်ကာ ဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက် ဖြစ်နေပါတယ်။ သို့ပါ၍ ဘလော့ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးရန် နှင့် စကားလုံး သုံးစွဲရာ၌လည်း ဓမ္မဘလော့နဲ့ လျော်ညီသည့် စကားလုံးများ ပရိယာယ်ကြွယ်စွာ သုံးစွဲဖို့ လေးစားစွာ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
7:25pm အချိန်စက်တင်ဘာ 19, 2013, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အမရဲ့ စာမျက်နှာလေးကို အလည်ရောက်လာတဲ့ညီမလေးရေ ပန်ချီကားအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အမကလည်း ညီမလေး အတွက် လက်ဆောင်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်။
5:17pm အချိန်ဇူလှိုင် 22, 2013, တွင် ကိုကျော်သန်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ခုလိုမျက်စီလယ်ပြီးရောက်လာတဲ ညီမလေးကို ၀ပ်းသာစ္စာဖြင့်ကြိုဆိုပါတယ် ဒါပေမဲ့ စားလိုမရဘူးနော ငှက်သီးနဲကြောင် ။
4:58pm အချိန်ဇူလှိုင် 21, 2013, တွင် အမေ့ဂုဏ်ရည်ဆရာတော်လေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:02pm အချိန်မေ 10, 2013, တွင် angel မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:54am အချိန်မေ 1, 2013, တွင် saw htwe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
1:05pm အချိန်မတ် 23, 2013, တွင် mymother1221@gmail.com မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:42pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 15, 2012, တွင် ပိသေးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လူတစ်ယောက်ဟာအပြင်ထွက်သွားတယ် လမ်းမှာလမ်းဘေးခွေးက လိုက်ဟောင်တယ်... အဲဒီမှာဒေါသကထွက်သွားတယ်....လမ်းဘေးခွေးဆိုတဲ့သဘောက တစ်ကောင်ဟောင်ရင် ကြားတဲ့အကောင်တွေကပါ ၀ိုင်းဟောင်တဲ့ သဘောရှိတယ်မို့လား...လမ်းလယ်ခေါင်မှာရှက်ကလဲရှက်
ဒေါသကလဲထွက်နဲ့ အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါ အိမ်ကခွေးက အမှီးလေးနန့်ပြီးလာတာပဲ...အဲဒီအချိန်မှာ
ဒေါသတွေအားလုံးက ခွေးဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါပေါ်ထွက်နေတာလေ... အဲတော့ အိမ်ကခွေးပဲ ပိတ်ကန်လိုက်တော့တယ်...လူ့သဘောဆိုတာဒီလိုပါပဲ...
တစ်ခါတုန်းက စာထဲလူတစ်ယောက်ဟာ တောင်ပြုံးကိုယ်တော်တွေ ကိုးကွယ်တယ်တဲ့ သူဖဲရိုက်ရင်နိုင်အောင်ပေါ့...အဲဒီနေ့က ဖဲကရှုံးတာမှ ရက်ရက်စက်စက်တဲ့ ...အဲဒီလူဟာ လူရွတ်ဆိုတော့အိမ်ရောက်တော့ နတ်ရုပ်တွေ စင်ပေါ်ကဆွဲချလိုက်ပြီး ညောင်ပင်အောက်သွားပစ်လိုက်တယ်...အဲဒါကို ခြံတစ်ဝန်းထဲနေတဲ့ ဘေးအိမ်ကအဒေါ်က မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီး သွားယူပြီးစင်ပေါ်တင်ကိုးကယ်လိုက်တာ ၀က်သားဟင်းလဲချက်စားရော
အိပ်ရာထဲလဲသွားတာမှကွေးနေတာပဲ...မေးကြည့်တော့နတ်ရိုက်တာတဲ့လေ...လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ နတ်ရုပ်တွေ ကောက်ယူကိုးမိတာကိုး...သူ့တူကတော့ အေးဆေးပဲ...နတ်ကတော်ကိုမေးကြည့်တော့ သူတို့ကို ကိုးပြီးမလေးမစားလုပ်လို့လို့ပြောတယ်လေ...နတ်ဆိုတာမျိုးကလဲ အိမ်မွေးပဲရိုက်ကြတယ်...ဒါကြောင့်မကိုးနိုင်ရင်အစောကြီးထဲက မကိုးနဲ့လို့...
နတ်တွေ သိုက်နန်းရှင်တွေရဲ့ သဘောက ဒီလိုပါပဲ...မကိုးပါနဲ့ ကိုးမိရင်လဲ မစော်ကားပါနဲ့ ကံနိမ့်တဲ့အခါပြန်ခံရမှာပါ...အိမ်ခွေးလိုပေါ့
ဒီဘလော့ကို မေ 16, 2013 တွင်10:22am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
နေမကောင်းဖြစ်တာကြာခဲ့ပြီ ... (ရ)နှစ်လောက်ကြာလာပြီ အစာလည်းသိပ်စားမ၀င်ဘူး...ဆရာဝန်ပြတော့လည်း ရောဂါက မည်မည်ရရ ရှာမတွေ့ပဲ ဆန်ပြုတ်သောက်မှသက်သာတဲ့ဘ၀ရောက်ပြီး ဆန်ပြုတ်သောက်နေရတာ (၅)လလောက်ရှိလာပြီ...ရောဂါကထူးဆန်းတယ် ...မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အောင်ခြင်းရှဟ်ပါးသီချင်းဘွဲ့နားထောင်တဲ့အခါနဲ့ အင်္ဂုလိမာလသုတ်ရွတ်တဲ့အခါပဲသက်သာတာ....ရွှေမြို့တော်ဆိုဒ်မှာ စာဝင်ဖတ်လိုက်တာ ဒီဂါထာလေးတွေ့တာနဲ့ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ်ထင်လို့... ရွတ်ကြည့်လိုက်တာ တစ်ခေါက်ရွတ်ရုံနဲ့တင်…